Musharixiinta gudoonka Baarlamanka Somalia oo bilaabay ol oleyaashooda doorashada – SBC
Musharixiinta gudoonka Baarlamanka Somalia oo bilaabay ol oleyaashooda doorashada
Posted by Webmaster on August 25, 2012 Comments
Musharixiinta u sharaxan Afhayeenka koobaad ee Baarlamanka Soomaaliya ayaa maanta bilaabay olole yaal balaaran oo ay kulamo gooni gooni ah ugula yeelanayaan xidhibaanada Baarlamanka.
Ka dib markii la shaaciyay in Qabasahada Araajida musharixiinta xilalka baarlamanka ay dhamaatay ayaa waxaa siweyn u muuqanaya olole yaasha ay ku doonayaan musharixinta isa soo taagay in ay ku helaan codadka xildhibaanada.
Qado sharafiyo iyo kulamo gooni gooni ah ayaa lala yeelanayaa xidhibaanada Baarlamanka waxaana musharaxwalba uu ololihiisa ka wadaa goobo waaweyn oo ku yaala Magaalada Muqdisho.
6 Musharax ayaa isu soo taagay jagada Gudoomiyaha Baarlamanka, halka 9 kalena ay isu soo taageen jagada gudoomiye ku xigeenka koobaad, waxaana siweyn loo dareemayaa u diyaar garowga doorashadaasi oo lagu wado in Maalinta berito ay qabsoonto.
Sikastoo ay ahaatana waxaa doorashooyinka 3dan jago lagu wadaa in hal maalin ay qabsoonto si loo sii amba qaado howlaha u yaala Baarlamanka Cusub ee soo dhisaya dowlada cusub ee Soomaaliya golaheeda sare.
SBC International Mqudisho